90 andro ho an’ny fiovana eny anivon’ny Fitsarana : napetraka any amin’ireo Tribonaly any Antsiranana ny rindram-baiko (logiciel) hampiasaina amin’izany. – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/90 andro ho an’ny fiovana eny anivon’ny Fitsarana : napetraka any amin’ireo Tribonaly any Antsiranana ny rindram-baiko (logiciel) hampiasaina amin’izany.
Elisé Romuald 25 septembre 2021
Fanamby mazava tsy maintsy tanterahina ao anatin’ny 3 volana ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Ny fanatrarana ny taha 70/30 no mari-drefy hita maso sy azo tsapain-tanana, 70%’ny voafonja no voatsara, 30% sisa miandry fitsarana.
Tontosa tao Antsiranana ny 24 septambra, ny fitsidihana ny fonja notarihin’ny tale jeneralin’ny Raharaham-pitsarana,­ ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy. Nohenoina, noraiketina an-tsoratra hoenti-mandroso sy manatsara ny asa ireo fangatahana sy fitarainana.
Ankoatra izay, tontosa koa ny dinikasa tao amin’ny Fitsarana Ambony (Cour d’Appel) niarahana tamin’ny Mpitsara sy Mpiraki-draharaha ary Mpandraharahan’ny Fonja.
Namaranana ny asa ny fanolorana ofisialy ny “logiciel” hanampy amin’ny fanatsarana sy fanamorana ary fanafainganana ny asa eo anivon’ny Tribonaly misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana, ny Fitsarana misahana ny lafiny ara-bola ary ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany.
Fiaraha-miasan'i Madagasikara sy ny Amerikanina : laharam-pahamehana ho an'ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy ny ady amin'ny fanondranana olona sy harena voajanahary an-tsokosoko.
Changement climatique: la Banque Mondiale va amplifier son apport financier dans les pays pauvres
Loholona Eongobelo Marcel: vahaolana amin’ny tsy fananana asa ny fisokafan’ny orinasa “Base Toliara”
PM Ntsay Christian: “se focaliser sur le long terme”
CENI: tsy mbola misy rafitra nahavita fifidianana izay ho solotenany hatramin’izao.
Kolikoly eo anivon’ny tafika : miaramila 30 no noroahana
Le Sénat et l’Assemblée nationale condamnent l’attentat contre le Président Rajoelina
Arizaka Rabekoto Raoul: Tapaka karama ary nesorina tsy ho mpitsara intsony
Governementa : tapitra androany ny fe-potoam-piasan’ireo minisitra